शान्ति समाजद्वारा थप दुई पुरस्कार स्थापना - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशशान्ति समाजद्वारा थप दुई पुरस्कार स्थापना
शान्ति समाजद्वारा थप दुई पुरस्कार स्थापना
काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले श्रष्टा सम्मान अभियान अन्तर्गत थप दुई पुरस्कार स्थापना गरेको छ । मानवबहादुर रावल वातावरण श्रष्टा सम्मान र पद्यप्रसाद दाहाल श्रष्टा सौगात पुरस्कार स्थापना गरेको हो ।
दुवै पुरस्कारको राशि २० हजार रहेको छ । हरेक वर्ष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साहित्यका विभिन्न विधामा योगदान गरेका व्यक्तिलाई यी दुई पुरस्कार प्रदान गरिने शान्ति समाजले जनाएको छ ।
पुरस्कार स्थापनार्थ अक्षय कोषका लागि स्व. मानबहादुर रावलका छोरा तथा शान्ति समाजका उपसभापति कृष्णबहादुर रावलले दुई लाख र स्व. पद्यप्रसाद दाहाल (मादी, संखुवासभा) का नातिनि र नातिहरुले दुई लाख रुपैयाँ शान्ति समाजलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्वर्गीय रावल र दाहालको सम्झना गर्दै उनीहरुले सहयोगको घोषणा गरेका हुन् ।
यी दुई पुरस्कारसहित शान्ति समाजले स्थापना गरेका पुरस्कारको संख्या १३ पुगेको छ ।
Previous articleएकीकृत समाजवादीले पायो संसदीय दलको कार्यालय
Next articleटी-२० वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झर्‍यो